Jubbaland oo cambaareysay dueyntii Ciidanka Kenya ka geysteen Gobolka Gedo - Awdinle Online
Home News Jubbaland oo cambaareysay dueyntii Ciidanka Kenya ka geysteen Gobolka Gedo
Madaxweyne kuxigeenka Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan ayaa maanta shir gudoomiyey kulanka golaha amniga Jubbaland, kaas oo bishiiba mar qabsooma islamarkaana looga hadlo xaaladda Amniga guud ee deegaannada Jubbaland.
Sidoo kale waxaa kulanka ka qayb galay xubno ka tirsan Golaha Wasiiradda ee qaybta ka ah golaha Amniga, Saraakiisha kala duwan ee Ciidanka Jubbaland, kuwa Xooga Dalka iyo ciidamada qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta Midowga Africa ee AMISOM.
Waxaana kulanka diiradda lagu saaray qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin Xoojinta la dagaallanka Al-Shabaab, Xoreynta Gobolka Jubbadda dhexe iyo deegaanada kale ee ka maqan gacanta Jubbaland iyo udiyaar garowga sugidda Amniga doorashooyinka dalka qaybta kaga aaddan Jubbaland.
Waxaa sidoo kale shirka ad loogu cambareeyay duqaymihii kadhacay degaanka ceelcade iyo degaanno hostaga Degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, kuwaas oo ay ku wax yeeloobeen Shacabka halkaa kudhaqan iyo hantidooda, waxayna dowlada dhexe ugu baaqeen in ay arinkaasi wax ka qabato.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo dalab u dirtay imaaraadka Carabta iyo arrin…
Next articleDowladda Soomaliya oo sheegtay in Ajaanib ka tirsan Al-Shabaab ay qarax ku dhinteen